Agencies momba ny trano sy tany - Easy Multi Display - Signage niomerika
Easy Multi Display koa ampiasain'ny maso ivoho trano!
"Misaotra ny Easy Multi Display, afaka mahita ny tolotra manintona anay indrindra ny mpanjifanay!"
Ity masoivohon'ny trano sy trano ity dia any Lyon, any Frantsa. Te hanana orinasa tsara hametraka rafitra takelaka nomerika vaovao amin'ny orinasany izy ka nanontaniany mpampiditra iray ao an-toerana izay nisafidy ny Easy Multi Display.
Ny masoivoho trano dia efa nampiasa Easy Multi Display nandritra ny volana maro ary afa-po be! Eny tokoa, ny ekipa teknikanay dia nanampy safidy hanisy URL avy amina rakitra an-tsoratra iray nangatahan'ny masoivohon'ny trano sy tany!
Ity fanampiana ity dia ahafahana manampy rohy mivantana amin'ilay notepad, noho izany ny masoivohon'ny trano sy trano dia tsy mila manokatra Easy Multi Display intsony hanovana ny fampisehoana azy. Ny agence real estate dia mila manokatra ny rakitra an-tsoratra fotsiny ary manova ny rohy anatiny hanova ny fampisehoana azy ireo!
Ny fidiranay amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifanay dia nahafinaritra ny mpitantana ity masoivohon'ny trano ity. Androany, mampiasa ny Easy Multi Display ilay masoivoho hampisehoana ny fananany eo am-baravarankely.
Ny fikirakirany dia misy efijery tokana napetraka eo am-baravarankely mba hahasarika ny mason'ireo mpandalo ny fananan-tany izay amidin'ny masoivohon'ny trano sy tany.
Ka noho io fampirantiana io dia nividy efijery sy solosaina kely iray izy, tariby HDMI ary ilay kinova "one screen" an'ny Easy Multi Display. Ny vidin'ny vahaolana dia 500 € eo ho eo
Kinova 3 hanomezana fahafaham-po ny karazana orinasa rehetra
Tsy maninona raha orinasa manana monitor 1 na mpanara-maso 6 ianao, Easy Multi Display dia mifanaraka amin'ny fikirakira rehetra!
Ovay amin'ny telefaona ny fampisehoana anao!
Easy Multi Display dia manohana ny Google Slides ary mamela anao hanova ny fampirantianao mivantana avy amin'ny Google Slides amin'ny telefaonao!